Meksika: Nosoniavin’ny Filoha Ilay Lalàna, Roa Taona Taorian’ny Haitrano Tao Amin’ny Toeram-pitaizana Zazakely ABC · Global Voices teny Malagasy
Meksika: Nosoniavin'ny Filoha Ilay Lalàna, Roa Taona Taorian'ny Haitrano Tao Amin'ny Toeram-pitaizana Zazakely ABC
MpanoratraMiguel Angel Guevara
Nandika (en) i Kitty Garden
Voadika ny 30 Oktobra 2011 17:46 GMT
Tamin'ny 5 Jona 2009 tany Hermosillo, Sonora (Avaratra Atsinanan'i Meksika), nisy toerana fitaizana zazakely antsoina hoe Guardería ABC kilan'ny afo. Zaza 49 no namoy ny ainy tanaty afo ary 76 no naratra. Niteraka sahotaka izany tranga izany tany amin'ny fiaraha-monina Meksikana ary maro ireo olona nanontany tena raha ho raharaha mangidin'ny tsy maty manota indray ity.
Nanao fanadihadiana lalina ny ray aman-drenin'ireo zaza ireo mba hitadiavana izay tena meloka ary hitondra izany eo anoloan'ny Fitsaràna Avo Meksikana.
Ankoatr'izay dia nanohana tolo-dalàna iray izay mitaky ireo toeram-pitaizana zazakely rehetra any amin'ny firenena – na an'ny fanjakàna, na tsy miankina na izy roa mitambatra – hanaraka ireo fepetram-piarovana faran'izay kely takiana, hanara-maso ny kalitao takiana, ary hanao fanaraha-maso matetika. Tafiditra anatin'izany koa ny famoronana rakitry ny lisitr'ireo toeram-pitaizana zazakely.
Lasa fantatra tamin'ny anarana hoe Ley 5 de Junio (Lalànan'ny 5 Jona) io lalàna io taorian'ny daty nitrangan'ny loza, ary sarotra ny làlana nizorany tamin'ny fanekena azy. Nandalo tany amin'ny Antenimieran-doholona izy nandritra ireo andro farany tamin'ny fivoriana mahazatra (tamin'ny faran'ny volana Aprily tamin'ity taona ity), izay nidika fa tokony hiandry hatramin'ny volana Septambra izany izay vao hiadian-kevitra ary ho eken'ny Antenimieram-pirenena. Na izany aza, taorian'ny nanekena azy tao amin'ny Antenimiera sy taorian'ny nandefasana azy tany amin'ireo mpanatanteraka hatao sonia farany sy ny fampiharana, somary nisalasala ihany ny Filoha Felipe Calderón hanao sonia azy.
Aogositra 2009: Tolona nataon'ny ray aman-drenin'ireo zaza namoy ny ainy tanatin'ny afo, sary avy amin'i Prometeo Lucero (CC BY-NC 2.0)
Manoloana izany tranga izany, nanao fanentanana manan-tanjona ireo Meksikana mpampiasa aterineto hanaingàna ny olona. Noho ny fanaovana izany firaisan-kinan'ny olom-pirenena izany dia nilefitra ny filoha ka nanambara ny fampiharana ny lalàna, tao amin'ny tranony omaly Alatsinainy 24 Oktobra. Indreto misy santionany amin'ny fanehoan-kevitra tamin'ny Twitter.
Tsy nanafina ny hafaliany i Daniel Gershenson (@alconsumidor), iray amin'ireo mpanohana ity lalàna ity tao amin'ny Twitter:
Nada más fuerte, que el poder de una gran idea cuyo momento ha llegado « #ley5deJunio #GuarderiaABC, VA
Tsy misy mahery noho ny herin'ny hevitra mafonja iray izay efa tonga ny fotoanany « #ley5deJunio #GuarderiaABC, VA
Manuel Robles (@mroblesmx) dia maneho ny fideràny sy ny fanajàny an'ireo ray aman-dreny nifanandrina tamin'ny fitsipiky ny politika mba hahatratrarana ny tanjony:
Respeto y admiración para los padres de #GuarderiaAbc . Saludo a quienes les han acompañado en su peregrinar #Ley5deJunio.
Haja sy dera ho an'ireo ray aman-drenin'ny #GuarderiaAbc. Miarahaba ireo niara-nizotra taminy tamin'ny tolony aho #Ley5deJunio.
Jesús Robles Maloof (@roblesmaloof), dia manamarika ny maha-zava-dehibe io lalàna io:
Increíble que no existiera una regulación integral de todos los centros de atención a la infancia. Gracias a la #Ley5deJunio ahora la habrá
Tsy mampino hoe tsy nisy fanaraha-maso ara-dalàna tany amin'ireny toeram-pitaizana zazakely ireny. Noho ny #Ley5deJunio dia hisy izany manomboka izao.
Oscar López (@oscarl) dia manasongadina ny lanjan'ity fahombiazan'ny olom-pirenena ity:
#ley5dejunio El logro de un movimiento de una tragedia que indignó a todo el país. Es lo mínimo que merece la memoria de aquellos niños(as)
#ley5dejunio Ny fahombiazan'ny tolona iray noho ny loza naharomotra ny firenena iray manontolo. Izany no kely indrindra mendrika ho fanomezam-kaja ny fahatsiarovana ireo zaza ireo.
Julio Márquez (@juliomarquez1), rain'i Yeye, dia nandefa hafatra feno hafaliana tanaty litera 140:
Gritenlo todos en TW¡¡¡¡ Mañana se publica #Ley5dejunio. Mis lagrimas hoy son de agradecimiento a ustedes, en nombre de mi hijito Yeye y mio
Mitatatata izany ny rehetra ao amin'ny TW!!!! Hampiharina rahampitso ny #Ley5dejunio. Androany dia mirotsaka ho fankasitrahana anareo rehetra ny ranomasoko, amin'ny anaran'ny zanakolahy Yeye sy ny tenako.